अचानक किन रोकियो अरुण तेस्रो आयोजनाको उद्घाटन ? - Enepalese.com
अचानक किन रोकियो अरुण तेस्रो आयोजनाको उद्घाटन ?
इनेप्लिज २०७४ चैत २४ गते १३:३१ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २४ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा क्रममा शनिबार हुने भनिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास अन्तिम समयमा रोकिएको छ ।
भ्रमणका बेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यसको संयुक्त शिलान्यास गर्ने तयारी भएपनि सरकारको तयारी नपुगेकाले रोकिएको हो । भ्रमणमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार अरुण तेस्रो आयोजना र पाईपलाइनको उद्घाटन नहुने भएको छ ।
कानुनतः उत्पादन अनुमतिपत्र लाइसेन्स नलिइ जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्न पाइँदैन । नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोले पनि उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको छैन । १ खर्ब ४ अर्ब कुल लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागि भारतको सरकारले लगानी गरिसक्ने निर्णय गरेकोले वित्तीय व्यवस्थापनको समस्या आयोजनामा छैन ।
भारतीय सरकारी कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन सो आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुलीसँगै करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाभ पाउने बताइएको छ ।
भारतीय सतलज निगमले १० वर्षअघि खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत लाइसेन्स पाएको आयोजनाको साढे तीन वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।